Arimaha Bulshada : 10 Faa’iido Oo Laga Dhaxlo Cabista Biyaha Diiran | Puntlandi.ca
Home Arimaha Bulshada Arimaha Bulshada : 10 Faa’iido Oo Laga Dhaxlo Cabista Biyaha Diiran
Arimaha Bulshada : 10 Faa’iido Oo Laga Dhaxlo Cabista Biyaha Diiran
Kulligeen waan ognahay sida biyuhu ay muhiimka ugu yihiin nolsha uguna faa’iido badan yihiin jirka, qofkana looga baahan yaahy inuu cabo 7 illaa 8 koob oo biyo ah maalintii si uu caafimaadkiisa u ilaalshado, laakiin waxaa dhici karta inaan ogeyn cabista biyaha diirran, gaar ahaan subxa hore ay cudurro badan daawo ka tahay.
Hadaba, maanta waxaan idiin soo gudneynaa 10 faa’ido ee cajiibka ah ee laga helo cabista biyaha diirran, waa sida lagu soo daabacay website-ka BoldSky ee ka hadla arrimaha caafimaadka.
1 – paranasal sinuses Sanka ayuu dajiyaa
Qiiqa kasoo baxaya biyaha diirran ayaa khafiifiya san xiranka iyo madax wareerka, gaar ahaan dadka sanboorka qaba.
2 –Shaqada habdhiska dheefshiidka oo ku hagaagta
3 -Dareemayaasha jirka oo ku xasila
Dareemayaasha jirka ayaa ku xasila, gaar ahaan marka uu qofku xanuun ka dareemayo kala goosyada.
4 -Calool Majiirka ayuu u wanaagsan yahay
Marka aad koob biyo diirran ah aad cabto waxa uu kaa garab siinayaan in calool majiirka uu kaa yaraado, calooshana waxa uu ku garab siinayaa iney saxarada banaanka u saarto.
5 -Miisaanka jirka ayaa lagu dhimaa.
6 -Jirka ayaa suntan looga nadiifiyaa
Biyaha diirran waxay dhiirigelinayaan Endocrine jirka, sidaa darteed jirku si wanaagsan ayuu dibadda ugu saarayaa dhidid farabadan oo bannaanka u saran suntan.
7 – Waa xanuun baabi’iye dabiici ah
Biyaha kulul waxay dhiirigelinayaan in unugyada jirka dhiir farabadani uu ku burqado, taas oo xubnaha u saamaxaysa iney nasasho dareemaan, waana arrinta keenaysa in nooc kasta oo xanuun ah oo ku hayaa uu kaa khafiifo.
8 -Hurdo wanaagsan ayaa laga helaa
Haddii hurdo xumo ay ku hayso, waxaa fiican inta aadan seexan ka hor inaad cabto koob biyo diirran ah, hurdo xasilloon oo degdeg ah ayaad ka helaysaa.
9 – Daalka ayaa lagu yareeyaa
Haddii aad cadaadis badan aad ka dareemayso shaqada iyo nolosha, waxaa lagaa rabaa oo kaliya inaad cabto biyo diirran si daalka aad uga yareyso jirka.
10 -Jirka ayuu qalleylka ka ilaaliyaa
Marka aad cabto koob biyo diirran ah waxa uu jirka ka helayaa qoyaan maalintii oo dhan ah, arrintaas oo kaa ilaalinaysa mushkiladaha qalleylka ka dhasha ee uu ka mid ka yahay garaaca wadnaha, hamaansiga xilliga maalintii, daalka iyo madax xanuunka.